Duqa cusub ee magaalada Galkacyo oo xilkii la wareegey, iyo kii hore oo la dardaarmay. [Dhegaysi …] – Radio Daljir
Duqa cusub ee magaalada Galkacyo oo xilkii la wareegey, iyo kii hore oo la dardaarmay. [Dhegaysi …]
Agoosto 30, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Aug 30 – Gudd. gobolka Bari Muuse Geele Yusuf oo aan ka waraysanay heshiis la dhex dhigay 2 beelood oo dhawaan ku dagaalamay miyiga degmada Ufayn …
– Dagaalada ka socda gobollada Koonfureed ee Somaliya ma kuwa diineed baa, mise? http://daljir.com/
Ciidamadii Ethiopian-ka ahaa oo ka baxay magalaada Beledweyn. [Akhris …]